UTom Wolfe Unobangela wokufa; Ufe njani uTom Wolfe? - Ezintsha
Eyona Ezintsha UTom Wolfe, uMbhali kunye noMdali we ‘New Journalism,’ Usweleke eneminyaka engama-88
UTom Wolfe, uMbhali kunye noMdali we ‘New Journalism,’ Usweleke eneminyaka engama-88
UTom Wolfe usweleke eneminyaka engama-87.Imifanekiso kaGetty
UTom Wolfe, obhale iinoveli ezithengisa kakhulu njenge I-Bonfire yeZinto Ezingamampunge kwaye Uvavanyo lwe-Acid yoNcedo lweMbane Kwaye wasungula umbutho wokubhala owaziwa ngokuba yiNew Journalism, usweleke ngale ntsasa eneminyaka engama-88.
Ummeli kaWolfe uLynn Nesbit ukuqinisekisile ukusweleka kwakhe. Uxelele INew York Times ukuba wayelaliswe esibhedlele ngenxa yosulelo.
UWolfe ushiyeke ngumfazi nabantwana ababini.
Ubomi bokuqala bukaTom Wolfe
Uzalelwe eRichmond, eVirginia, uWolfe waya kwisikolo sokulungiselela iikholeji iSt Christopher. Wayengumongameli webhunga labafundi, umhleli wephephandaba lesikolo kunye nomdlali webhola ophambili
UWolfe emva koko wabhalisa eWashington naseLee University. Wayengumhleli ophambili wesiNgesi kunye nomhleli wezemidlalo kwiphephandaba lesikolo. Uncede nasekufumaneni imagazini yoncwadi.
Umsebenzi kaTom Wolfe kunye neNtatheli eNtsha
Umsebenzi wokuqala wephephandaba likaWolfe wawunjengomphengululi wesixeko IWashington Post Ngo-1959. Ubuye waxela esuka eCuba ngexesha lakhe.
Kodwa impembelelo enkulu kaWolfe kwi Thumela (kunye nemithombo yeendaba ngokubanzi) yayiyindlela yakhe yokunika ingxelo, awayeyibiza Ijenali entsha .
UWolfe nabanye ababhali bexesha lakhe njengoNorman Mailer, Hunter S. Thompspon, Truman Capote, Joan Didion kunye noGay Talese basebenzise iindlela zokubhala fiction kumabali abo. Amabali abo ayengaphantsi, iziqwenga ezinde apho bazibhaptiza ngezifundo zabo.
Ngo-1962, uWolfe wathuthela kwisiXeko saseNew York, apho ahlala khona ubomi bakhe bonke. Uyilele indlela yakhe yobuntatheli eNtsha INew York Herald Tribune . Waqala ukunxiba uphawu lwentengiso isuti emhlophe ngeli xesha lobomi bakhe.
Omnye wemizekelo ebalaseleyo yomsebenzi kaWolfe yile Uvavanyo lwe-Acid yoNcedo lweMbane , iprofayile ka-1968 kaKen Kesey kunye neeMerry Pranksters. Eli qela lajikeleza ilizwe ngebhasi laza lathambisa i-Kool-Aid yabo nge-LSD ukuze banyuke. Iprofayili kaWolfe yenye yeendaba zokuqala ezifundwa ngokubanzi malunga ne-1960s counterculture.
Ababhali abaninzi kunye neentatheli bamkele isimbo sikaWolfe, kwaye iNew Journalism isasetyenziswa unanamhla.
Intsomi kunye neNgxelo kaTom Wolfe
UWolfe wapapasha iincwadi ezininzi ngaphandle kwento entsha yobuntatheli.
Iincwadi zakhe ezingamanyani zibandakanyiwe Izinto ezifanelekileyo , umzobo woosomajukujuku beMercury Seven njengoko babelungiselela ukuya emajukujukwini. Incwadi yahlengahlengiswa kwifilimu.
Olunye uhleko lukaWolfe lubandakanyiwe Ubukumkani beNtetho , 2016 uhlalutyo lukaCharles Darwin noNoam Chomsky.
Ngo-1987, uWolfe waxhuma waba yintsomi kunye I-Bonfire yeZinto Ezingamampunge , idrama enamabhongo, ubuhlanga, udidi lwentlalo, ezopolitiko nokunyoluka ngo-1980 eNew York City. Inoveli ivele okokuqala ngezavenge ezingama-27 kwi Amatye agiqekayo kwiphephancwadi. Ikwahlengahlengisiwe yenziwa ifilimu kunye neopera.
Ezinye iinoveli zikaWolfe zibandakanyiwe Indoda Ngokupheleleyo , NdinguCharlotte Simmons kwaye Buyela kwigazi .
Imigaqo uTom Wolfe Wenziwe
Ngaphandle kweNew Journalism, ii-aphorism zikaWolfe zibandakanya:
Ingxelo yokwaneliswa-yindlela yokunika ingxelo apho intatheli ifihla kwaye ijonge umxholo ixesha elide.
I-Right Stuff-iimpawu zengqondo nezomzimba ezifunekayo ukuze ube ngumqhubi wovavanyo we-NASA.
Mna iminyaka elishumi —Inkcazo kaWolfe yeminyaka yoo-1970 njengexesha apho umntu ebebaluleke ngaphezu koluntu luphela.
I-Statusphere-UWolfe wayekholelwa ukuba amadoda anamhlanje akhathalele ubume ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into.
Ulungile u-Ol 'Boy-Inkcazo kaWolfe yomgcini weemoto zesitokhwe uJunior Johnson njengearchetype yobomi baseMazantsi.
Iingcaphuno ezigqwesileyo ezivela kuTom Wolfe
Ihlelo lunqulo olungenawo amandla ezopolitiko.
Intsomi ayisoze ife.
Umsebenzi wam wonke, kwiintsomi okanye kubunyani, ndixelile kwaye ndabhala ngabantu abangafani nam.
Akukho mbonakalo emhlabeni inomtsalane ngakumbi kunaleyo yomfazi omhle xa epheka isidlo sangokuhlwa kumntu amthandayo.
Thixo, amaphephandaba ebesenza amabali unaphakade. Olu hlobo lokukhohlisa kunye nokukhohlisa alungomsebenzi weNew Journalism.
Ukuba umntu okhuselekileyo unenkululeko oye waphangwa, inkululeko iyabanjwa.
Lo ngumculi, ke, umntu olambileyo wobomi, ubudlakudla banaphakade, ubuhle obubi, ikhoboka lozuko.
Ukuphendula ngokufa kukaTom Wolfe
UTom Wolfe usweleke. Umsebenzi wakhe wabutshintsha ubomi bam kwaye wandiqinisekisa ukuba ndibhale into engeyonyani. Uyaphila, Tom.
-USusan Orlean (@susanorlean) UCanzibe 15, 2018
Qhawula u-Tom Wolfe. Elinye lamaxesha endandiwathanda kakhulu yayikukuxoxa ngeBonfire yeZinto ezingelutho kunye naye e @ 92y nge @iqosweb . UWolfe wayesoloko eneekawusi ezingcono pic.twitter.com/y1kOTCkCvo
-U-Preet Bharara (@PreetBharara) UCanzibe 15, 2018
Ukuba awuzange ufunde 'iRadical Chic' kaTom Wolfe kunye 'neMau-Mauing The Flak Catchers,' uphoswe. Yiya namhlanje kwaye ukhumbule oyena mbhali ungoyinyani wesiqingatha sokugqibela senkulungwane yama-20. https://t.co/sX7PUnmssS
-Ben Shapiro (@benshapiro) UCanzibe 15, 2018
UTom Wolfe RIP. Sonke siphila kwindawo elahliweyo eya 'kwiBonfire of the Vanites.'
-Ross Douthat (@DouthatNYT) UCanzibe 15, 2018
Injongo yoBomi yiHam Sandwich
UDiane Kruger noNorman Reedus bathenga iRegal eyi- $ 8.5 yezigidi zeHollywood Hills Ekhaya
Ezi-12 ze-Emojis zifumana ezona mpendulo kwiiNkqubo zokuDibana
Lo Mqhubi weBachelor Ukhuthaza abaKhenkethi abakhubazekileyo ngokwasemzimbeni
Iilebhu ze-testosterone zokukhuthaza uhlolisiso lwamadoda
spider man ukucima ukwenzakala okumnyama
iindlela zendalo zokongeza kubantu abadala
aquasana uphononongo lokucoca amanzi indlu yonke
iindawo zokuba nobudlelwane